Sonam Kapoor Oo Arbaaz Khan U Sheegtay In Lagu Aflagaadeyn Jiray Oraahda Ah “Wey Dheertahay, Wey Buurantahay Yaa Rabo Oo Guursanaayo” – Filimside.net
Atiriishada caanka ah Sonam Kapoor ayaa ka qeyb gashay barnaamijka Arbaaz Khan jilayaasha Bollywoodka ku wareeyso ee lagu magacaabo Pinch waana barnamij xidigaha lagu wareysto Tv-yadana laga daawado.
Horey waxuu barnaamijkan Arbaaz ugu casuumay xidigo dhowr ah sida Varun Dhawan, Kareena Kapoor, Karan Johar, Sonakshi Sinha iyo kuwa kale maalintii shalay ahed ayaana xalqada Sonam hawada lagu fasaxay.
Arimo xiiso leh ayee goobta shaaca kaga qaaday Sonam sida in Kareena Kapoor baraha bulshada si dhuumaaleysi ah ku isticmaasho, nolosheeda gaarka ah, shaqadeeda iyo arimo kale hadaba mid kamid ah waxyaabihii ay goobta kaga hadashay waxaa kamid ahayen in hada kahor la daba dhigtay.
Waxay sheegtay in quruxdeeda iyo qaab dhismeedkeda dad badan ku mashquuleen waana kuwa iyada naceebka u hayaan xumaan iyo aflagaado ayeena ka faafin jireen xidigtaan waxay tiri iyadoo ka hadleyso arinkaa.
“Kuwa qaarkood waxay idhihi jireen tan waa laf oo aad u caato u ah kuwa kalena waxay idhihi jireen waa mid buuraan yaa guursan doono halka kuwa kalena ay idhihi jireen midaan sida u dheer yaa guursan doono.”
“Wax walbo wey igu tilmaameen hadana iyaga dhexdooda isma waafaqsana oo midba waxbuu igu sheegay anigase waxaan ahaa qof aan tixraacin sheekooyinkaas sida qof aan ogeyn oo kale ayaan isku dhaafin jiray.”